i-fitbit ikhupha i-os 5.0, kodwa zimbini kuphela ii-smartwatches ezihambelanayo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Fitbit ikhupha i-OS 5.0, kodwa zimbini kuphela ii-smartwatches ezihambelanayo
I-Fitbit ikhupha i-OS 5.0, kodwa zimbini kuphela ii-smartwatches ezihambelanayo
UFitbit ulungile kwaziswa i-OS 5.0 ngoku iqengqeleka kwii-smartwatches zayo ezintsha, Imvakalelo kunye neVersa 3 . Kunye nohlaziyo olukhulu, uFitbit wakhupha i-SDK 5.0 entsha evumela abaphuhlisi ukuba baqale ukwenza ii -apps ezintsha okanye bahlaziye esele zikhona ukuxhasa ii-smartwatches ezimbini.
Ngelishwa, zonke ezinye ii-smartwatches zeFitbit azihambelani ne-OS 5.0 entsha. NgokukaFitbit, i-OS entsha yenzelwe ngokukodwa iSense kunye neVersa 3, ke ayenzi sicwangciso sokuzisa uhlaziyo kwiimodeli ezindala. Ukwenza icace ngakumbi, iFitbit OS 5.0 ayisoze ifumaneke ukukhuphela ukuba unayo enye yezi smartwatches: Ionic, Versa, Versa Lite, okanye Versa 2.
Ukuba ungomnye weefitwatwatchs ezintsha, i-Sense okanye iVersa 3, uya konwaba xa usazi ukuba iFitbit OS 5.0 inolwimi olutsha loyilo kunye neUI ehlaziyiweyo. Kwakhona, uhlaziyo luzisa izinto ezintsha zomsebenzisi, kunye nokushukuma komzimba okutsha kunye nokuhamba ngokukhawuleza.
Umzekelo, ukuba u & apos; kwisicelo, ukuswayipha ukusuka ekhohlo ukuya ekunene ngoku kuya kukuthathela inyathelo elinye. Ngapha koko, ukucofa iqhosha lasekhohlo kuya kuhlala kukusa kubuso bexesha.
I-Fitbit OS 5.0 kunye neefos zenkqubo entsha ye-Raiju
Xa kuziwa kwimbonakalo, uFitbit utyhile ukuba uhlaziyo lwayo lwe-OS lubonisa uRaiju, inkqubo yefonti entsha ekholelwa kwinkampani ukuba 'iyasebenza ngakumbi kwaye kulula ukufunda.' Ukuba ungumnikazi weFitbit Sense okanye iVersa 3, kungekudala uza kukwazi ukugweba ngokwakho.
Ngaphezulu, onke amaqhosha, imvelaphi, ii icon, imibala, kunye neethayile zifumene ukuphuculwa kokubonakalayo okukhulu. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, iFitbit OS 5.0 inezinto ezininzi ezinokuphuculwa kokusebenziseka, ezinje ngotshintsho kwiqhosha kunye nobungakanani bokubhaliweyo.
Ke, unayo, iFitbit OS 5.0 ibandakanya ukuphuculwa kwe-UI kunye nokuphuculwa okuninzi okulungiselelwe umboniso omtsha wesiko (squircle) kunye nesithethi kwiFitbit Sense kunye neVersa 3, yiyo loo nto iphumelele kwaye ingekho kwiifatwatches zakudala zeFitbit.
Eyona midlalo ilungileyo ye-iphone
pixel 2 xl ukukhanya kwesaziso
Ungayitshintsha njani / yenze kwakhona kwi-iPhone
I-Motorola DROID Turbo 2 yokuHlola
Ezinye iifowuni ziya kuyeka ukusebenza kwi-T-Mobile & apos; s i-4G kunye neenethiwekhi ze5G ngoJanuwari olandelayo
Imitya yePython - Ushwankathelo lweSiseko seNtambo yokuSebenza
Eyona misebenzi mihle yangoLwesihlanu oMnyama kwi-Samsung Galaxy S10, S10 +, Galaxy Note 10, Qaphela 10+